Git Sangit News » ह्वात्तै बढ्यो प्याजको मूल्य, किलोको कति पुग्यो ?
ह्वात्तै बढ्यो प्याजको मूल्य, किलोको कति पुग्यो ?
काठमाडौं। नेपाली बजारमा सुकेको प्याजको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । भारतबाट प्याज आउन छाडेपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हो । एक साताअघि किलोको ४० रुपैयासम्ममा किनबेच भइरहेको सुकेको प्याजको मूल्य अहिले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
प्याज निर्यात सम्बन्धी नियमलाई संशोधन गर्दै भारतले बैंगलोर रोज प्रजातिबाहेकका अन्य प्याज निर्यातमा सोमबारदेखि प्र’तिबन्ध लगाएपछि मूल्य बढेको हो । भारतले हरेक चाडपर्वको बेला प्याज निर्यातमा रोक लगाउँदै आइरहेको छ । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा सोमबार होलसेल मूल्य ६० रूपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै मंगलबार प्याजको मूल्य बढेर ७५ रूपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आज बुधबार पनि प्याजको मूल्य बढेर किलोको ११९ रूपैयाँ पुगेको छ। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा खुद्रा व्यापारीले पहिलेदेखि रहेको स्टक प्याजको मूल्य बढाएर बेचेका छन् । आज काठमाडौं उपत्यकाका खुद्रा पसलले प्याजको मूल्य बढाएर किलो कै १३० रूपैयाँसम्म पुर्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १४:५२